Oge ịka nká e mere atụmatụ: nka nke aghụghọ ka ị ga -emefu karịa ... | Ngwaike efu
La zubere ịba uru Ọ bụ ihe ijuanya na ndị na -azụ ahịa maara ma tụọ egwu. Mana, n'agbanyeghị na ọ bụ ihe nzuzo, a ka nwere ọtụtụ ihe nzuzo. Na mgbakwunye, ndị na -emepụta ụdị ngwaahịa na ọrụ niile emeela ka ọ bụrụ nka iji nweta ọtụtụ uru na -efu ndị ahịa dochie ngwaọrụ gị n'ụzọ ngwa ngwa.
Nke a na -ebute ọtụtụ nsogbu, ọ bụghị naanị na akụ na ụba nke ịmanye ndị ọrụ itinye ego n'ịzụ ngwaahịa ọhụrụ. Ọ na -egosikwa ọghọm ndị ọzọ doro anya, dị ka iwepụta oke anwụrụ ọkụ na ihe mkpofu nke na -anaghị etinye aka ọ bụla na sistemụ na -adigide na gburugburu ebe obibi.
1 Kedu ihe echere ime agadi?
2 Ụdị nke ịka nká
3 Uru na ọghọm nke ịka nká
4 Kedu ngalaba ọ na -emetụta?
5 Na -alụ ọgụ maka ịka nká
Kedu ihe echere ime agadi?
La zubere ịba uru Ọ mejupụtara imepụta ngwa ahịa nwere obere ndụ bara uru ka ndị na -azụ ahịa wee megharịa ịzụrụ ihe n'ime obere oge. Ihe ọjọọ a na ụlọ ọrụ abụghị ihe ọhụrụ ugbu a, n'agbanyeghị na ugbu a bụ mgbe a na -ekwukarị ya. E guzobela ya na mpaghara ahụ ogologo oge. N'ezie, otu n'ime ngwaahịa mbụ ihe a metụtara bụ ihe ngosipụta mbụ nke ọkụ ọkụ site n'aka Thomas Alva Edison na 1901.
Edison n'onwe ya kere a prototype na -ewe awa 1500, nke ga -abụ ihe ịga nke ọma maka ire ụlọ ọrụ ndị na -ahụ maka imepụta ya. Ọ ga -ekwe omume ịmepụta bọlbụ na -adịgide adịgide, mana ime nke a ga -apụta na ha agaghị ere nke ukwuu. A ga -ekekwa Phoebus Cartel ka ọ machie ndị nrụpụta niile na -emepụta ngwaọrụ na -ewe ihe karịrị awa 1000. Otu nkwekọrịta zuru oke na mpaghara ahụ iji mejupụta akpa gị wee bupụ ya ụzọ maka gị ...
Mgbe ahụ enweghị mmata ebe obibi, enweghị ikike ndị ahịa, yabụ ụwa niile bidoro ilo ya na omume a na -adịgide ruo taa. Na mgbakwunye, ọmarịcha ihe ọhụrụ ga -abịa maka omume a, mgbe ọ gbasaa n'ọtụtụ mpaghara ndị ọzọ iji merụọ ahịa ngwaahịa niile yana ọbụna ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ na -adịghị ahụ anya dịka ngwanrọ.
N'oge na-adịbeghị anya Apple bụ otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị mkpa Enwetala ya n'ihi ntozu oke nke ngwaọrụ ya, dị ka iPod, ma ọ bụ nke ụfọdụ iPhones ya, nke butere ọbụna mkpesa sitere n'aka otu dị ka OCU.
Ụdị nke ịka nká
N'ụzọ aghụghọ na n'ụzọ doro anya nye onye ọrụ, ndị na -emepụta ihe na ndị nrụpụta nwere ihe niile echepụtara nke ọma iji nweta uru kachasị na ihe ha na -emepụta. Agbanyeghị, usoro nwere ike ịdị iche iche na ngwaahịa ọ bụla, na -achọta ọtụtụ ụdị nke ịka nká dị ka:
Atụmatụ mbupute bara uru: bụ nke na -emetụta arụmọrụ ngwaahịa ị zụrụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ nwere ike ịbụ ikike ebe nchekwa ka dị obere ma ị ga -azụta nke ka ukwuu, arụmọrụ CPU, ike moto, wdg.
Oge ịka nká na -elekọta mmadụ ma ọ bụ nke uche: A na -enweta ya site na ịre ahịa, ịre ahịa na aghụghọ nke ọha. Steve Jobs bụ ọkachamara na ya. Ọ bụ nke na -agba ndị na -azụ ahịa ume ka ha nwee ngwaọrụ iche na ha bụ akụkụ nke ụkpụrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ma ọ bụ mee aghụghọ ụfọdụ ka onye ọrụ wee chee na ngwa ha adịla ochie na ọ ga -agbanwe ya. Dịka ọmụmaatụ, ịnwe iPhone dị ka ihe mara mma na njirimara nke klaasị ọha dị elu.
Nrụrụ arụ ọrụ ma ọ bụ nke atọrọ atọrọ. Ọ bụ otu n'ime ebe kachasị agbasa taa, ma n'ezie ị nụla nke "X anaghị adịte aka dịka ha na -emebu«, Inwe ike dochie X maka ụgbọ ala, ngwa, ma ọ bụ ihe ọ bụla ...
Oge ntorobịa na -apụtaghị ìhè: Ọ metụtara nke gara aga, ebe ọ bụ na ọ na -egbochi gị inwe ike ịrụzi ngwaahịa n'ihi na enweghị akụkụ dochie ya, n'ihi na onye nrụpụta na -eme ka o sie ike maka nrụzi, ma ọ bụ n'ihi na akụkụ ahụ na -efu karịa ịzụta nke ohuru.
Emebere oge ịka nká n'ihi enweghị nkwekọrịta: ọ nwere ike ịdị ka uru, mana a na -eduzi ya na enweghị nkwekọrịta. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ha na -emelite sistemụ arụmọrụ ma ọ naghị akwado ngwaọrụ ma na -amanye gị ịzụta nke ọhụrụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnụ ụtọ nkwalite ahụ, ma ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri ọhụrụ na -adabaghị na nke gara aga, wdg.
Rịba ama Ịka nká: Ọ na -adịkarị na ndị na -ebi akwụkwọ ma ọ bụ na -arụ ọtụtụ ọrụ, mgbe ngwaọrụ na -adọ aka na ntị na katrij ink ma ọ bụ ụda adịghịzi mkpa ma ọ bụ na a ga -agbanwe ya, ma ọ bụ na ụfọdụ ndị na -asacha isi ink na -akwado ịkwụsị ọrụ mgbe oge ụfọdụ gasịrị, na -emelite firmware nke na -amanye gị. ịkwụsị iji ụfọdụ ihe eji arụ ọrụ dakọtara, wdg.
Oge ntoju nke obibi: mgbe ha mere ka ị zụta ngwaahịa ọhụrụ ọzọ nke a na -eche na ọ ga -adigide, na -arụ ọrụ ike ma na -eme gburugburu. Ma eleghi anya ọ bụ otu a, mana ọ nwekwara ike ime na dochie ya na-ebute nsogbu karịa ka ọ na-edozi, dịka ọmụmaatụ imepụta mkpofu e-ma ọ bụ mkpofu eletrọnịkị. Na mgbakwunye, okwu a nwere njikọ chiri anya ma ọ bụ asacha ihu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke ọtụtụ ụlọ ọrụ na -achọ ime ...
Ngalaba ndị ọzọ Ọ dị iche na ngwaike na ngwanrọ, ha nwekwara oge ịka nká, dị ka ihe ịchọ mma maka ụlọ ọrụ ejiji na ngwa, n'ihi nke kacha mma tupu ụbọchị ma ọ bụ ụbọchị mmebi maka nri ma ọ bụ ọgwụ, wdg.
Uru na ọghọm nke ịka nká
Oge ntorobia n'ezie emeela obere ma ọ bụ enweghị uru ndị ahịa. Ọ na -ewetara ya nsogbu. Uru ya bụ naanị maka ụlọ ọrụ na -ere ngwa ahịa ndị a, ebe ọ bụ na ọ bụ ha na -erite uru mgbe ị ga -azụta ngwaọrụ ọhụrụ n'aka ha. Nke ahụ bụ, naanị ebumnuche ya bụ uru akụ na ụba.
Agbanyeghị, nke ahụ na -eweta nsogbu dị oke mkpa na -esite na omume a, dịka:
Mmetụta na akụnụba ndị ahịa.
Ọgbọ nke nnukwu ihe mkpofu ma ọ bụ mkpofu eletrọnịkị (yana ụdị ihe mkpofu ndị ọzọ na ihe mkpofu ewepụtara) na-emetọ ma ọ bụ na-emecha emezigharị.
Nnukwu oriri, nke na -egosi nrigbu nke akụ ndị ọzọ na ụlọ ọrụ na -adigide adịghị ala.
Kedu ngalaba ọ na -emetụta?
Oge ịka nká a haziri ahazi ọ bụghị naanị na -emetụta ụwa nke teknụzụ ọhụrụ, dị ka ngwaike na ngwanrọ, yana ọtụtụ ndị ọzọ, dịka ụgbọ ala, ejiji, nri, ụlọ ọrụ ọgwụ, na ogologo wdg.
Na -alụ ọgụ maka ịka nká
Iji lụso ịka nká, a chọrọ nkwa sitere n'aka ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ịmanye ndị na -eme ya mmachi na ịhazi ya iji gbochie ime ya. Agbanyeghị, ọtụtụ gọọmentị na -ala azụ ime nke a n'ihi nrụgide akụ na ụba sitere na otu nrụgide dị iche iche na mpaghara ụlọ ọrụ metụtara.
Mgbanwe ihu igwe na mmụba nke ndị ọrụ na -enyere ụfọdụ ụlọ ọrụ aka ịmalite imepụta iwu iji luso ịka nká. Isi ihe kpatara nke a bụ European Union, nke mepụtara usoro usoro iji baara ndị na -azụ ahịa na Europe uru. Dịka ọmụmaatụ, gbatịkwuo afọ nke akwụkwọ ikike, kwe ka nrụzi ngwaahịa dị ma mee ka ndị nrụpụta jiri ụdịdị modul na imepụta akụkụ ahụ mebere ogologo oge, ịhazi ụkpụrụ ụfọdụ (dịka: chaja), iji akara na -egosi ntụkwasị obi nke ngwaọrụ iji nyere ndị ahịa aka ịhọrọ nke ka mma, wdg.
Ihe a niile ga -enyere aka nke ukwuu mmetụta gburugburu ebe obibi yana n'ọgụ megide mgbanwe ihu igwe, na mgbakwunye ime ka ndị na-azụ ahịa bụrụ ngwaahịa a pụrụ ịtụkwasị obi na ịchekwa ego.
Dị ka onye ọrụ Ị nwekwara ike mejuputa ụfọdụ omume ga -enyere aka ịlụ ọgụ megide oke ịkpa oke:
Hazie ihe ịzụrụ ngwaahịa ndị a pụrụ ịtụkwasị obi na nke modulu.
Megharịa ngwaahịa site na ịre ya dị ka nke abụọ ma ọ bụ nye ha iji nye ha ohere ọhụrụ.
Imegharị na ịtụfu ya nke ọma. Nke a, n'agbanyeghị na ọ naghị enye aka ozugbo n'ọgụ megide oke ịkpa oke, ọ bụ ezigbo omume ịzere na mkpofu na -ebute mmetọ ma ọ bụ ebe mkpofu na -ekwesịghị ekwesị.
Kwalite ọdịbendị nke oriri kwesịrị ekwesị, na mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Nweta ngwaahịa na-eme ka ọ dịrị gị mfe ịrụzi, ma ọ bụ yana akụkụ enwere ike wepu maka nnọchi, ma ọ bụ site na ndị nrụpụta na-enye nkwado ogologo oge na akụkụ ahụ.
Lekọta ngwaahịa gị ka ịgbatị ndụ ha bara uru.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » General » Oge ịka nká e mere atụmatụ: nka aghụghọ ka ị wee mekwuo ...
Ezigbo ederede! Daalụ!
Daalụ nke ukwuu maka ịgụ anyị!